မြင့်မားသောအပူချိန်လောင်ကျွမ်းခြင်း၊ အပူကုသခြင်း၊ သဲပေါက်ကွဲခြင်းကြောင့်သံချေးမတတ်သည့်အပြင်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုကာကွယ်သည့်ဆေးသုတ်ဆေးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအစိုင်အခဲသံမဏိကိုယ်ထည်။
လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုနှင့်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် Control system သည် Japan PLC နှင့် English touch screen ကိုအသုံးပြုသည်။
ဂျာမန် Burkert ထောင့်ထိုင်ခုံအဆို့ရှင်များကဲ့သို့အရည်အသွေးမြင့်ပြီးတည်ငြိမ်သောစက်အစိတ်အပိုင်းများ။
ကောင်းစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောစက်၏အရွယ်အစား၊ ပိုက်လိုင်းများမှစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ မြန်သောရေနွေးငွေ့ဖိအားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လျော့ကျခြင်းတို့ကိုနားလည်ရန်။
စက်တွင် built-in လေဟာနယ်စနစ်တပ်ဆင်ထားပြီးဗဟိုလေဟာနယ်စနစ်သို့လည်းဝင်ရောက်နိုင်သည်။
တည်ငြိမ်သောရေနွေးငွေ့ထိန်းချုပ်မှုများအတွက် Balance အဆို့ရှင်။
EPP (ကျယ်ပြန့်သော Polypropylene)
EPP (Expanded Polypropylene) သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောပုံဆောင်ခဲပေါ်လီမာ / သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးအလွန်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာသောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာကာကွယ်မှုနှင့်လျှပ်ကာပစ္စည်းများဖြစ်လာသည်။ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည် ၁. စွမ်းအင်စုပ်ယူမှု - EPP ထုတ်ကုန်များသည်အထူးပူဖောင်းပုံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသဖြင့်စွမ်းအင်ကိုအပြင်ဘက်မှထိထိရောက်ရောက်စုပ်ယူနိုင်သည်။ 2. ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း - EPP ထုတ်ကုန်များကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မြန်ဆန်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ...